အထင်မှားစေခြင်းငှါသံသယ applications များ။ သူတို့ကလုပ်နိုင်တယ် !! | Androidsis
ဒီနေ့ Androidsis တွင်သင်နှင့်ယခင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗွီဒီယိုတစ်ခု၊ အပလီကေးရှင်းအကြောင်းမဟုတ်သောဗီဒီယို၊ ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတစ်ခုယူလာသည်။ ဒီတစ်ခါတော့သင့်ကိုအငြင်းပွားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်စောင်ယူလာပေးပြီး၊ တရား ၀ င်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးမှအပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြင့်ပင်လျှင် Android သုံးစွဲသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုသင်ပေးချင်သည်။
ထိုအခါငါအငြိုးထားသောဗီဒီယိုပြော, ငါဒီအလေ့အထများကိုကြော်ငြာချင်သောကြောင့်, သူတို့က Google Play စတိုးတွင်တရားဝင်များနှင့်မကြာခဏပေမယ့်, ကနောက်ဆုံးတော့ကြောင်းယုံကြည်မှုပိုမိုယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနည်းအသုံးပြုသူများကိုလှည့်ဖြားရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်, သူတို့က Ethical ဖြစ်ကြသည်ထင်သော နောက်မှအဘယ်သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုသင်တို့ဆိုကြသော်၊ အထင်မြင်မှားစေသောအက်ပလီကေးရှင်းများဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီး, သင်သည်ဤအပြုအမူနည်းလမ်းများကိုအမှန်တကယ်ဥပဒေပြုရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်စေသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုလှည့်စားသည်။
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ Google Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သောအခမဲ့လျှောက်လွှာကိုသင့်အားပြသသည်, အဆင်သင့်ရှိပြီးသား in-app ကိုဝယ်ယူမှုအဖြစ်လူသိများလျှောက်လွှာအတွင်းဝယ်ယူမှုအားလုံးသိပြီးသူများအပြင်, app ကို, (အခမဲ့ဖြစ်မည်ဟု application တစ်ခုယုတ္တိအရာ), app ကိုအတွင်းထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းအဆင်ပြေစွာသတိပေးထားသည်။
လျှောက်လွှာ၏ဖော်ပြချက်၊ ထို chorizo ​​၏ application နှင့် Google store တွင်များသောအားဖြင့်သပိတ်မှောက်ခြင်းများကိုဖတ်သည့်အခါ၎င်းသည်၎င်းကိုကစားရန်သို့မဟုတ်၎င်းအတွက်ကစားနိုင်သည့်စမ်းချောင်း application တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဘယ်သောအခါမျှသတိပေးခြင်းမရှိပါ။ ကြိုးစားနိုင်ပါ နှစ်စဉ်ကြေးမှာ ၅၄.၉၉ ထက်မပိုသောနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုသင်ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စာရင်းသွင်းရပါလိမ့်မည်.
လျှောက်လွှာကိုအခမဲ့ download လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သင်ကြိုးစား။ မရပါသူတို့ကသင့်ကိုအခမဲ့ပေးသောဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသုံးရက်မျှပင်သင်ကြိုးစားရန်အတွက်သင်သည်သင်၏ဒေတာနှင့်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ Paypal အကောင့်သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုသို့နှစ်စဉ်ငွေကောက်ခံရန်သဘောတူခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့သင်သတ်မှတ်ပေးသောနည်းလမ်း။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဗွီဒီယိုနှင့်ဤပို့စ်အစတွင်မှတ်ချက်ချထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသော်လည်း၎င်းသည်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်နည်းသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းခြင်းသို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သည် (သို့) ကြိုးစားပြီးနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကြေး ၅၅ ယူရိုနီးပါးပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်သင်အားတရားစွဲဆိုထားသည် သို့မဟုတ်သင်၏ Android ကိုကောင်းစွာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏ Android terminal မှနှင့်သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်မှ ၀ ယ်ယူမှုများတစ်ခုချင်းစီအတွက် password သို့မဟုတ် fingerprint ဖြင့်အတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
သုံးစွဲသူ (သို့) သူတို့၏ကလေးငယ်များအမှားများကြောင့်ဤလျှောက်လွှာနှင့်စီးပွားရေးပုံစံတူညီသောလျှောက်လွှာများမည်မျှ ၀ င်ငွေရရှိကြောင်းသိလိုပါက၊ လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်မချမှီ၎င်း၊ အချက်အလက်၊ ငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုဖတ်ရတာအလေ့အထနည်းနည်း၊ ၎င်းသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်အနည်းဆုံးယူရို ၅၄.၉၉ ပေးဆောင်ရသောငွေပမာဏဖြစ်သည်။.
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရယုံကြည်ပါတယ် ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသင်ပေးရသောစာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်သည် သူတို့ကိုပင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့, ၎င်းတို့သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးရှိအထူးအမျိုးအစားတွင်ရှိသင့်သည်၊ ၎င်းတွင်အခမဲ့သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောငွေပေးချေခြင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ကွဲကွာခြင်းအပြင်ဂူဂဲလ်မှကောင်းစွာမှတ်သားထားသော၊ ထိန်းချုပ်ပြီးတည်ရှိသည်။ ယခုအခါသူတို့သည်ကြော်ငြာအနည်းငယ်မှတစ်ဆင့်အားသွင်းနိုင်သည့်ထောင်နှင့်ချီသောအခမဲ့ application များအတွက်အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးသွားသည်။
ထို့အပြင်သက်ဆိုင်သည့်လျှောက်လွှာ၏အမည်နှင့်အတူ၎င်းသည်မဖြစ်မနေစာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတင်းပို့သင့်သည်။။ , ပြီးတော့ငါနာမည်ကိုပြောတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက screenshots တွေအပြင်ငါတို့အားလုံးကိုအများဆုံးအာရုံစိုက်တဲ့အရာပဲ၊ \_ t
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်းပါး၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုပြသထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး၎င်းထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖြားနိုင်သည့် applications များ ကျွန်ုပ်ဂူးဂဲလ်ပလေးတွင်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံလိုသည်မှာများစွာသောပါ။
အချို့သောလျှောက်လွှာများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်မချခင်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာဖတ်ပါဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိုသော ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစကားဝှက်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ဗွေများတောင်းခံနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Android ကိုအိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးနေရာတွင်ထားခဲ့လျှင်၎င်းသည်နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိသည့်အရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Google Play Store မှသီးခြားခွဲခြားထားသည့်ကဏ္inများမှဤလျှောက်လွှာများကိုပုံမှန်လုပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက်ပိုသည်ဟုသင်ပြောလိုသည်။ ဒီပို့စ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးအဲဒီအကျင့်တွေအကြောင်းမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားလိမ့်မယ် ငါကိုယ်တိုင်ထင်မြင်ချက်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိဘဲအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်နဲ့သူတို့ဟာလှည့်စားရှာဖွေပြီးအတွေ့အကြုံနည်းတဲ့သုံးစွဲသူများ (သို့) ယုံကြည်စိတ်ချရသောသုံးစွဲသူများ (သို့) အရွယ်မရောက်သေးသူများ၏အမှားများကြောင့် ၀ င်ငွေရရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒီစတိုင်၏များစွာသောအခြားသူများကဲ့သို့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ကလေးသူငယ် / လူငယ်ပရိသတ်အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးရည်ရွယ်သည့် application များ။ ဘယ်တိုက်ဆိုင်မှုလို့မထင်ဘူးလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဂရုတစိုက် !! လမ်း လွဲ၍ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရှိနေနိုင်သောသံသယဖြစ်ဖွယ် application များ
Snapdragon3နှင့် 865 MP သုံးဆိုက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည့် Vivo NEX 64s မျက်နှာပြင် All-flagship အသစ်ဖြစ်သည်
Xiaomi သည် POCO F10 အတွက် Android 1 Global Stable Update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်